Uri sabtigiisa shanaad wuxuu keenay 2.75 Crore iskoorkii Bahubali 2 ee sabtigiisa shanaad 2.50 Crore waa laga tilaabsaday!! – Filimside.net
Uri sabtigiisa shanaad wuxuu keenay 2.75 Crore iskoorkii Bahubali 2 ee sabtigiisa shanaad 2.50 Crore waa laga tilaabsaday!!
Mararka qaar wey dhacdaa in filim si waali ah Boxoffice-ka u qabsado laakiin marka aan dib u raacno taariikhda qarnigan 21-aad ku xeen daaban kaliya Gadar Ek Prem Katha iyo Bahubali The Conclusion ayaa ah labo filim iskoorada ay Boxoffice-ka ka sameeyeen cidna la tartami karin laakiin haatan filim sedexaad ayaa soo baxay waana Uri – The Surgical Strike!
Filimka Uri – The Surgical Strike ayaa ku jiro xaalad riyo ku dheehan madaama sabtigiisa shanaad uu filimkan keenay 2.75 Crore (Trade Figure) waana iskoor cusub taariikh ahaan ma dhicin filim lacagtaan inuu keeno sabtigiisa shanaad!
Halyeega filimada Bahubali 2 wuxuu sabtigiisa shanaad keenay 2.50 Crore waxaana haatan ka tilaabsaday Uri – The Surgical Strike oo 2.75 Crore keenay sabtigiisa shanaad waa arin muujineyso Uri inuu yahay filim mucjisadiisa dhanka Boxoffice-ka inaysan dhamaad laheyn!
Filimka Uri wuxuu ilaa haatan soo xareeyay 205.35 Crore (Trade Figure) mudo 30-maalmood uu tiyaatarada saaran yahay mana ahan filim hakanaayo waxaana muuqato in xitaa filimada waa weyn ee masraxa lasoo saarayo Gully Boy (14 Feb) iyo Total Dhamaal (22 Feb) uu tiyaatarada la qeebsan doono waana macquul inuu gaaro 230 Crore!
Fadlan hoos kaga bogo mudo 30-maalmood ah filimka Uri – The Surgical Strike ganacsiga uu sameeyay soona daabacday shabakada Boxoffice India (BOI):
Todobaadka sedexaad – 37.06 Crore
Sabti shanaad – 2.75 Crore
Wadarta Guud – 205.35 Crore (Trade Figure)
Waxaa Aqrisay 373